RSS: Ataovy miharihary ny rohy fahana | Martech Zone
RSS: Ataovy miharihary ny rohy fampandrenesanao
Zoma Janoary 5, 2007 Alakamisy Oktobra Oktobra 23, 2014 Douglas Karr
Noho ny fisian'ireo mpitety tranonkala vaovao dia tsy dia niahiahy loatra ny amin'ny fametrahana ny RSS rohy ao anatin'ny votoatin'ny tranokalako. Manomboka mieritreritra an'izany aho.
Raha mbola tsy nahalala ianao dia afaka mamantatra azy ho azy ireo mpanamory vaovao ireto RSS fahano raha mbola fantatra ao anatin'ny lohan'ilay pejy izy io. Tsindrio ny RSS ny valiny dia mahatonga anao "misoratra anarana amin'io feed io" amin'ny alàlan'ny browser-nao. Ka rehefa misafidy ny fahana ao anaty fitetezana anao ianao dia ho hitanao ny lisitry ny tantara mavitrika azo alaina amin'ny alàlan'ny fahana.
Ao anatin'ny lohatenin'ny tranokalako dia manana ireto kaody manaraka ireto aho:
Ny navigateur dia mahita azy io kaody ary manome tondro ahafahana misoratra ara-bola:
Talohan'ny famoahana ny Internet Explorer 7 dia nihaona tamin'ny mpandrindra browser hafa i Microsoft ary nanapa-kevitra izy ireo fa ny marika manerantany ho an'ny RSS dia ho
Nandritra izay 6 volana farany izay dia niantehitra tamin'ny atiko aho RSS boky ho an'ny olona hisoratra anarana amin'ny sakafoko. Na izany aza, vao haingana aho no nanao fitsapana izay nametrahako RSS rohy ao amin'ny footer an'ny pejiko rehetra. Hainao? Tao anatin'ny roa andro dia nitsambikina manodidina ny 20% ny famandrihana fahana! (Mampiasa aho Feedpress manara-maso).
Tsapako fa tsy dia ara-tsiantifika izany, saingy tiako ny mpamaky hanana izany RSS ny rohy famahanana dia fantatra mazava sy misy ho an'ny mpamakinao izay mampiasa fitaovana hafa izay tsy mahita ny rohy amin'ny alàlan'ny kaody lohan-dohanao.
Tags: fampiharanafahanafeed header tagrohy fahanaFeedBurnermifandimby relrss feedtag lohan'ny rssrss xmlXML
WordPress: Ny Plugin # 1 isaky ny tranokala TSY MAINTSY manana
WordPress: Avereno backup ary avereno amin'ny mpizara hafa
5 Jan 2007 amin'ny 7:19 PM
Antony iray hafa hanaovana an'izany: indraindray ny mpamaky te-hampifandray amin'ny famandrihana anao. Rehefa mamaky olona tiako hisoratra anarana aho, dia matetika no ampidiriko ao amin'ny rohy misy ahy mandritra ilay andro miaraka amin'ilay naoty (Misoratra anarana) mifamatotra amin'ny sakafony. Ao amin'ny Firefox 2 dia manana configurable aho mba handeha mivantana any amin'ny FeedDemon, ka raha tsy manana rohy eo amin'ilay pejy ianao dia afaka manindry bokotra havanana sy mandika ny rohy dia mila mijery Source aho hahazoana izany.
5 Jan 2007 amin'ny 8:08 PM
Izay no nanoratako ny bilaoginao tamin'ny alàlan'ny kisary RSS eo ambany. Tsy mba nandinika an'izay tondro ato anaty barairesin'ny mpizaha-tany mihitsy aho, fa angamba rehefa mampiasa browser; izay tsy dia matetika loatra dia mitady ny Icon foana aho.
zavatra iray hafa tokony tadidio koa dia tsy ny rehetra no ho tonga amin'ny bilaoginao amin'ny alàlan'ny browser. Ny sasany dia ho tonga amin'ny alàlan'ny rohy ao amin'ny mpanjifa RSS tsy misy mpitety tranokala ary tena mahalana no hahitan'ny mpanamory tranonkala builtin ny mpanjifa amin'ity fomba ity…
5 Jan 2007 amin'ny 8:12 PM
Io ilay rohy kisary RSS niasako anarana - satria tsy niraharaha ny barairesy mihitsy aho tamin'ity miampy ity dia tena tsy dia misoratra anarana amin'ny alàlan'ny mpitety tranonkala aho.
Mipetraka ao amin'ny mpamaky RSS aho ary noho izany dia hita sy ampiana toy izany ny rohy ato amiko ary vitsy dia vitsy ny mpanjifa RSS irery no manana an'io karazana aseho io.
Jan 6, 2007 ao amin'ny 12: 38 AM
Doug, miaraka aminao tanteraka aho amin'ity iray ity! Vao nanao lahatsoratra tao amin'ny bokotra RSS an'ny Fitiavana 🙂 vaovao aho
Hevitra tsara Sterling, manao toy izany koa aho indraindray.
6 Jan 2007 amin'ny 7:59 PM
Torohevitra tsara, azoko amin'ny roa izao.
Jan 9, 2007 ao amin'ny 3: 53 AM
Misaotra amin'ity lahatsoratra ity. Niady hevitra tamin'ny bilaogera iray hafa aho tamin'ny volana lasa teo ary nanontany tena foana aho hoe aiza no toerana tsara indrindra hametrahana bokotra famandrihana. Ao amin'ny tranokalako amin'izao fotoana izao dia tsy manana afa-tsy ny kisary RSS ao amin'ny baran'ny adiresy browser sy ny footer aho, saingy mieritreritra aho fa ny iray amin'ny sidebar na lohateny dia ho ilaina ihany koa, mifototra amin'ny fanehoan-kevitra novakiako teto.
11 Jan 2007 amin'ny 10:48 PM
Nanana ny ahy tany an-tampony aho, nefa izao manontany tena aho hoe maninona no tsy napetrako tany ambany mihitsy taloha.
Fomba fisainana tsara!